အနက်ရောင် အိပ်မက်တစ်ခု၏ ၀ိဥာဉ်များ...: ချစ်လှစွာသော.....ဇရာ
Posted by Pyiet Oo Aung at 3:18 AM
" HAPPY BIRTHDAY PAR PHO PHO "
THIS POST IS ONE OF MY FAVOURATE
LOVED IT !!! LOVED IT !!! LOVED IT !!!
REALLY TOUCH ALL THE WORDS WITH HIGH-LIGHTED......
IT IS SO BEAUTIFUL TO ME........
ပျော်ရွှင်ဖွယ် မွေးနေ့ ဖြစ်ပါစေ ဦးမင်းသော် ... ခင်ဗျာ :)
သံသရာ အတွက် ကိလေသာတွေ ဖြတ်နိုင်ဖို့ ဆေးလိပ်က စ ဖြတ် လိုက်ပါ စို့ ခင်ဗျာ ...
ဖတ်ရဒါ တကယ်ကောင်းတယ်။ စာကးလုံး သုံးနှူံးပုံက ထိမိတယ်.. စကားလုံးတိုင်းက တွေးစရာတွေပေး နေတယ်..I like it. ဪ.....ဇရာ..ဇရာ.......
အဖိုးရဲ့ မွေးနေ့ မှန်း အောက်ဆုံးရောက်မှပဲ သိတော့တယ်ဗျာ အရေးသားကကောင်းလွန်းတော့ ဇတ်ထဲမှာ မျောသွားတယ်း) ။
HaPpy Birthday ပါ ဖိုးဖိုးမင်းသော်...........။
Inn A Hpo htet kg` de History twe yae ning de tu hpyit bar zaeee..
ငါက ၀တ္ထုတိုမှတ်လို့ ဖတ်နေတာ အဖိုးမွေးနေ့ကိုး....
"Happy Birthday!" ပါဗျာ.........
ဖတ်ပြီး တွေးစရာတွေ ရသွားပါတယ်။ “လောကရဲ့ အချို့သော အရာများသည် မျက်လုံးများကို ခေတ္တဖြစ်ဖြစ် မှိတ်ထားမှသာလျှင် မြင်နိုင်စွမ်းရှိပါသည်…။” ဆိုတာကို တော်တော် သဘောကျမိပါတယ်။ မောင်လေးရဲ့အဖိုး ဦးမင်းသော် အသက်ရှည် ကျန်းမာပါစေ။ ဆေးလိပ်လည်း မြန်မြန် ဖြတ်နိုင်ပါစေး)